China Hoodie mveliso kunye nabenzi | Umbono
Ezi hoodi zenziwe ngokwezifiso zinobungakanani obungaphezulu, ubungakanani be-boxy kunye nepokotho enkulu enkulu, enjeya yeskirt esidala. Abantwana, ulutsha, kunye nabantu abadala baya kuyixabisa ingaphakathi elithambileyo kwaye bayikrazule iilebhile zentamo. Umxube wepotton we-polyester uthetha ukuba abanako ukunciphisa.
I-1.Ezi hoodies ezinokwenziwa ngokwezifiso zinobungakanani obukhulu, i-boxy fit kunye nepokotho enkulu eyongezelelweyo, njenge-sweatshirt yesikolo esidala. Abantwana, ulutsha, kunye nabantu abadala baya kuyixabisa ingaphakathi elithambileyo kwaye bayikrazule iilebhile zentamo. Umxube wepotton we-polyester uthetha ukuba abanako ukunciphisa.
Ngaphezulu kwemibala engama-20 ekhoyo, ezi pullover hoodies zilungele iqela lakho okanye umsitho okhethekileyo. Beza ngemibala eqinisekisiweyo ebonakalayo, nayo, ebenza bagqibelele ukuyila iklabhu yakho yokusebenza okanye umsebenzi wasemsebenzini wangaphandle.
intshi Ubungakanani S M L XL 2XL 3XL 4XL
Egqithileyo ukuprinta okuqhelekileyo okungenanto kweepolyester ebaleka ihempe yelogo
Okulandelayo: Ihowuliseyili ipholiyesta spandex Mens ezemidlalo umkhondo ukuzolula ukuzilolonga iblukhwe ngomvumbo osecaleni
Elungiselelweyo hooodies Ishicilelwe